Raha tsiahivina, dia ny 20 martsa teo no nisehoana fanafihana mitam-piadiana teny amin’ny manodidina an’Antsahabe akaikin'ny tonelina Ambanidia ka nisy ny fifampitifirana teo amin’ny polisy sy ireo jiolahy zay nahafatesana Raim-pianakaviana iray. Voasambotra tamin’izany ny iray tamin’ireo jiolahy. Tafaporitsaka kosa ireo namany. Nanohy hatrany ny fikarohana ny polisy ka nandritra ny fanadihadihana natao tamin’ity jiolahy vosambotra ity no nahafantarana ny toerana nisy ny namany. Nisy ny fanarahan-dia sy velam-pandrika nataon’ny polisy ka tra-tehaka ny alatsinainy 18 may 2020 teo amin’ny mpivarotra vy Ambalavao Isotry ity jiolahy ity. Taorian’ny fanadihadihana natao azy dia niaiky ny heloka vitany izy ary natolotra ny fitsarana ny 23 mey 2020 ary naiditra am-ponja.